कावासाेती गाेलीकाण्डकाे २७ बर्ष – Daunne News
हामीलाई त यस्ताे बज्रपात पर्याे, अरू कसैलाई नपराेस् !
सालिक राम काेइराला –
२९ असाेज कावासाेती, नवलपुर ।
रातीकाे दुई बजेकाे हुँदाे हाे । भटटट गाेली चलेकाे आवाज आयाे । छिमेकीले मेराे श्रीमानलाई गाेली लागेकाे खबर सुनाए । म एकदमै हक्कानिएँ । बाक्य फुटेन । छाति गरूड्गाे भयाे । मनमा अनेकथरि कुरा खेल्याे । म त आकुल-ब्याकुल भएँ । आज भन्दा २७ बर्ष अघिकाे कहालिलाग्दो घटना सुनाउँदै दुखेसाे पाेखिन् कमला पन्तले-हामीलाई त यस्ताे बज्रपात पर्याे,अरू कसैलाई नपराेस् । कावासाेती गाेलीकाण्डमा परि घाईते भएका श्रीमान माेहन बाबु पन्तलाई गुमाउनु परेकाे असहिय पीडा थियाे उनिमा । तात्कालिक एमालेका प्रतिबद्द कार्यकर्ता थिए माेहन बाबु पन्त ।
उनकाे देहावशान पछि कावासाेती-३ कि कमला पन्तकाे खुसि लुटिएकाे छ । घर उजाडिएकाे छ । परिवारले अभिभावक गुमाएकाे पीडा यहि दिनले पटक,पटक बल्झाउने गरेकाे छ । २०४९ असाेज २९ काे घटना थियाे त्याे । कावासाेतीकाे पुष्पलाल चाेकमा राती २ बजे चलेका दर्जनाै राउण्ड गाेलीले स्थानीयकाे हाेस उडाएकाे थियाे । प्रसङ्ग टनकपुर सन्धि र त्यसले निम्त्याउन सक्ने खतरा बिरूद्द केन्द्रीत थियोे । कंचनपुरबाट उर्बादत्त पन्त र ईश्वरी खरेलकाे नेतृत्वमा काठमाडौं हिडेकाे साईकल र्यालीलाई चाेरमाराकाे जंगलमा राेकेर बेपत्ता पारिएकाे बिराेधमा चक्काजाम गर्दा माेहनबाबु पन्त रगतमा लतपतिएर ढल्नु परेकाे थियाे । उर्बादत्त पन्त त्यतिबलै एमालेका सांसद थिए । उनिहरूलाई पक्रेर सदरमुकाम परासी नलगी सेमरी पुर्याईएकाे रहेछ । सहि सूचना नपाउँदा आक्राेशित जनताले सकुशल रिहाइको माग गर्दै सडक अवराेध गरेका थिए । प्रजिअ नारायण झाले अनावश्यक बल प्रयाेग गर्दा बीभत्स घटना घट्याे । त्यसाे त माेहन बाबु पन्तलाई मात्रै हाेईन धेरैलाई गाेली लाग्याे । त्याे घटनामा । अग्याैलीका नर बहादुर थापा छातिमा गाेली लागेर ढले । तर उनी जीउँदाे सहिदको रूपमा रहेका छन् । कावासाेतीका बन्धु श्रेष्ठ र रस बहादुर गुरूङकाे हातमा गाेली लाग्याे ।
कावासाेतीकै दामाेदर ढुङ्गानाकाे खुट्टामा गाेली लाग्याे । डाेल बहादुर पाैडेल, अन बहादुर पुन र प्रसाद पुन सामान्य घाईते भए ।
गाेरखाका मान बहादुर तामाङकाे छातिमा गाेली लागेकाे थियाे । पुष्पलाल चाेकका घर,सटरहरू गाेलीले प्वालपारे । सैयाै यात्रु, स्थानीय र सर्बसाधारण भागाभाग भए । चिच्याहट र राज्य आतङ्कले कावासाेतीबासी त्राहिमाम् भए । उक्त घटनामा परि छातिमा गाेली लागेर ढलेका ज्यूँदा सहिद नर बहादुर थापा भन्छन्- म एमालेकै संगठित सदस्य हाे तर खानै नपाएपछि कुनै राजनैतिक बिचारै हुदाे रहेनछ। मेराे त पार्टीपर्तिकाे आस्था र बिचारै मर्याे । गाेली काण्डमा परि शख्त घाइते भएका र सहिद परिवारलाई राज्यले उचित राहत नदिएकाे उनिहरूकाे गुनासाे छ । नेकपाकै सरकार छ तर कुनै वास्ता छैन,नर बहादुरले भने । उनकाे दुखेसाे छ- छातिमा गाेली लागेका कारण काम गर्न सकिन्न । प्रेसर र शुगरले गालेकाे छ । छाेराहरूले काम नपाएर खाडीमा जानु परेकाे छ । कसैले वास्ता गर्दैनन् । कमला पन्तकाे त अझ श्रीमान् गुमेपछि बिचल्ली छ । एकटुक्रा जग्गा र सानाे घर सिवाय केही छैन । राज्यले श्रीमानलाई सहिद पनि घाेषणा गरेन । कयाैंलाई सहिद घाेषणा गरियाे राहत दिईयाे तर हामीलाई पर्गेल्याईयाे । उनले गुनासाे पाेखिन् । गतबर्ष नेकपाका नेता तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले सार्बजनिक समारोहमा सहिद घाेषणा गर्ने वचन त दिए तर पुरा गरेनन् । टनकपुर काण्डले गिजाेलेकाे कावासाेती अझै निकाे हुन सकेकाे छैन । तात्कालिक एमालेका नेताले टनकपुर काण्डले चाेईटिएकाे पार्टी त मिलाए तर त्यसले दिएकाे असहिय पीडा बल्झाईरहे ।
स्व. माेहन बाबू पन्त
के थियाे त टनकपुर काण्ड ?
तात्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद काेइरालाले १९९१ डिसेम्बर ५ मा भारतकाे भ्रमण गर्दा टनकपुर सन्धि गरे । शारदा ब्यारेजकाे बिकल्पमा भारतले नेपालकाे सहमति बिना ब्यारेज भन्दा ६ कि.मी माथी टनकपुरमा बाँध बाँधेर महाकाली नदिकाे पानी बनबासा पावर हाउसमा खसालेकाे थियाे । त्यहाँबाट १ सय २० मेगावाट बिजुली निकाल्ने र पावर हाउसकाे टेलरिस च्यानल साेझै शारदा नहरमा मिसाउने भारतकाे याेजना थियोे । गिरिजाले भारत भ्रमणमा नेपाली भूमि जिमुवाकाे ५ सय ७७ मिटर भारतलाई बाँध बनाउन दिने निर्णय गरे र दिए । भ्रमणमा भएकाे टनकपुर सन्धिकाे व्यापक बिराेध भयाे । तात्कालिन एमाले, जनमाेर्चा लगाएतले सडक र संसद दुबै तताए । गरिजाले सन्धि हाेइन समझदारी हाे भनी थामथुम पार्न खाेजे तर सकेनन् । २०४८ पुस २ मा याे मुद्दा सर्बाेच्च अदालत पुग्याे र ०४९ मंसीर ३० मा सर्बाेच्चले समझदारी हाेइन सन्धिनै हाे भनी फैसला गर्याे । प्रम गिरिजाप्रसाद याे फैसलाले अझ संकटमा परे । सन्धि हाे भनेपछि त संसदकाे दुई तिहाईले पास गर्नुपर्ने भयाे । अब उनी सन्धि एेन २०४७ संसाेधन गर्ने तर्फ अगाडि बढे । २०४९ माघ १५ मा लाेकराज बरालकाे संयाेजकत्वमा साे सम्बन्धि मूल्यांकन सुझाव समिति बन्याे । याे आयाेगले टनकपुर बाँधले व्यापक र दिर्घकालिन असर पार्दैन भन्ने प्रतिबेदन बुझायाे ।
स्वर्गीय माेहन बाबू पन्तकि धर्मपत्नी कमला पन्त
यसले प्रम गिरिजाप्रसादलाई थाेरै भएपनी राहत दियाे र उनी संसदकाे साधारण बहुमतबाट याे सन्धि पास गर्न प्रस्ताव दर्ता गरे । तर काङ्ग्रेसका लाैह पुरूष सर्बोच्च नेता गणेशमान सिंहले याे प्रस्ताव स्विकारेनन् । टनकपुर साधारण बहुमतबाट पारित गर्न खाेज्नु मृत्यू पत्रमा हस्ताक्षर गर्नू सरह हाे भने । उनकाे याे लेटर बमले काेइराला फेरि अप्ठ्यारोमा परे । उनले ताजा जनादेशकाे लागि २०५१ असारमा संसद बिघटन गरि मध्यावधि निर्वाचनको घाेषणा गरे । त्यसपछि टनकपुर सन्धिले कहिल्यै संसदमा प्रवेश पाएन।अबैध ठहर भयाे । २०५२ भदाैमा शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । उनले ०५२ माघ २९ मा महाकाली सन्धि भित्र घुसाएर टनकपुर सन्धिको बैधता कायम गरिदिए । महाकाली सन्धिमा नेपाल सरकारकाे तर्फबाट प्रम देउवा र भारत सरकारकाे तर्फबाट भारतीय प्रधानमन्त्री पी.भी. नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए । सरकारी स्तरबाट टनकपुरकाे टनटन त साम्य पारियाे । त्यस पछिका सरकारले सबै बिर्सियाे । तर त्यहि असमान सन्धिकाे बिराेधमा साथ दिएका कावासाेतीबासी प्रत्येक बर्ष असाेज २९ मा मुर्छा पर्ने र बहुरिने गरेका छन् ।
छातिमा गाेली लागेका कावासाेती-१४ त्रिभुवनटारका नर बहादुर थापा